သနားပါတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သနားပါတယ်
Posted by moethidasoe on Jul 5, 2011 in Copy/Paste | 15 comments
ဆရာဝန်ရဲ့စကား အလှဖန်တီးရှင် အဖေ့စကား တောင်ပြုံး နောက်ပွင့်
ရပ်ကွက်ထဲက ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပါ ..
သူက အစ်မတွေ ကြားထဲမှာ အငယ်ဆုံး တစ်ဦးတည်းသော သား ယောက်ျားလေး .. ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အစ်မတွေကြောင့် မိန်းကလေးလို ပြင်ဆင်တတ်တယ် .. သူ့အဖေက သဘောမကျဘူး .. ပြောဆိုတယ် မရဘူး .. ရိုက်နှက် ဆုံးမလဲ ခဏပဲ ..
အရွယ်ရောက်လာတော့ .. စကားပြောရင် .. များကလေ .. များကလေ နဲ့ .. တစ်ခါတလေ .. သွပ်ပြားကို မစနဲ့နော် ဆိုပြီး ချွဲချွဲပျစ်ပျစ် ပြောတတ်သေးတယ် .. ရပ်ကွက်ထဲက လူတွေအတွက်ကတော့ အကြောင်းသိဖြစ်လို့ ဘာမှ မဖြစ်ဘူးပေါ့ ..
တခါက ဆေးခန်းကို လာသေးတယ် ..
သူက ကျွန်မရဲ့ တူ အရွယ်ပဲ ရှိသေးတယ် ..
“ဆရာမ .. များကို ဒက်ပို ထိုးပေးပါ” ..တဲ့
“ရှင် .. ဘာအတွက်တုန်း .. ”
“ဆရာမကလဲ ဒိတ်အောက်နေပြီထင်တယ် .. ဒက်ပိုထိုးရင် “များ” ရင်တွေ တင်တွေ ထွက်လာမှ ပိုလှမှာပေါ့ ..”
“ခွေးကောင်လေး .. မထိုးနဲ့ ဒုက္ခ ရောက်မယ်နော် .. ဒါက ယောက်ျားတွေအတွက် မသင့်တော်ဘူး ..”
“တော်ပါ .. ဆရာမ မထိုးပေးလဲ .. များ တခြားမှာ သွားထိုးမယ် ..”
တကယ်လဲ တခြားမှာ သွားထိုးတယ် .. တားမရ ဆီးမရ .. တကယ်လဲ တင်တွေ ရင်တွေ ထွက်လာတယ် .. အသံကယောက်ျားသံ ..သြ သြ .. ဇလုတ်က ထွက်နေတော့လဲ မပျောက်ပါဘူး .. တင် ရင်ထွက်တာတွေက အလကားပေါ့ ..
ဒါပေမယ့် သူ့ကိုယ်သူတော့ ကျေနပ်နေလေရဲ့ .. နောက်ပိုင်း သူတို့ လိုင်းအတိုင်း ပညာတွေ သင်ရင်း အလှဖန်တီးရှင် ဖြစ်လာတယ် .. တော်တော်လဲ အလုပ်ဖြစ်တယ် ..
သူတို့ လိုင်းကလဲ အချိန်တန်ရင် တောင်ပြုံး ပွဲတော်ကို သွားရတယ် .. တရုန်းရုန်းပေါ့ ..
သူ့ ဘော်ဒါထဲမှာ ယောက်ျား ယူထားတာ တစ်ယောက်ရှိနေလို့ .. သူ့ကို အဲဒါတွေ အားမကျဖို့ .. စီးပွားရေးကိုပဲ ဂရုစိုက် ဖို့ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ပြောဆိုဆုံးမ ခဲ့သေးတယ် ..
တစ်ရက်တော့ ဆေးခန်းကို ရောက်လာတယ် .. ကွတကွတနဲ့
“ဆရာမရယ် .. ဆေးပေးပါဦး .. ”
“ဟဲ့ ဘာဖြစ်နေတာတုန်း .. ”
“များတော့ .. နောက်ပွင့်သွားပြီ .. လမ်းလျှောက်တာတောင်မှ နာနေတယ် ..”
ကျွန်မ အတော်သနားသွားတယ် .. အင်းလေ .. သူတို့ လိုင်းမှာ အနေတည်တဲ့လူက လွဲလို့ အများအားဖြင့် ဒီလိုင်းထဲ ရောက်ကုန်ကြတာ တွေ့နေပေမယ့် .. ဒီလောက် ရင်းနှီးတဲ့လူထဲမှာ မရှိတော့ .. ကြားရုံ ကြားခဲ့ရတယ် .. မကြုံခဲ့ဖူးဘူး .. သနားပါတယ် .. သူ့လို သဘောကောင်း .. အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့ ကလေးမှ ဖြစ်ရတယ်လို့ .. လိုအပ်တဲ့ ဆေးတွေ ပေးလိုက်ပြီး ..
“နောက်ထပ် ဒီလို မဖြစ်အောင်နေနော် .. လေးလုံး ကပ်သွားမှာ စိုးရတယ် .. ” ဆိုပြီး ဆိုဆုံးမလိုက်သေးတယ် ..
မကြာပါဘူး .. ရပ်ကွက် ပြောင်းသွားပြီး .. ယောက်ျားယူလိုက်တယ်လို့ ကြားရတယ်
ဟိုတလောကတော့ ဖျားလိုက် ၀မ်းသွားလိုက် ချောင်းဆိုးလိုက်နဲ့ အခြေအနေ ဆိုးနေပြီလို့ ကြားရတယ် ..
အစကတည်းက အဖေ့စကား ကို နားထောင်ခဲ့ရင် .. ဆရာဝန်ရဲ့ စကားကို နားထောင်ခဲ့ရင် .. ဆုံးမစကားတွေကို ကိုယ့်အတွက် ပြောနေပါလားလို့ ခံယူချက် မှန်မှန် ထားခဲ့ရင် ..ဒီလို ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးနော် ရယ်လို့ မချိတင်ကဲ ရေရွတ်မိရုံမှ အပ ..
(ရွာထဲက ပရိသတ်တွေလဲ .. ဘယ်လို မြင်သလဲ လို့)
(၂၀၀၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှာ ရေးခဲ့တယ်)
ိဟိုတခါကလည်း ဂမုန်းပွင့်မှာ အခြောက်နဲ့ ယောက်ျား စုံတွဲတစ်တွဲတွေ့သေးတယ်
အခြောက်ဆိုရင် ပြင်ထားတာများ မှုန်လို့..
အန်တီမိုး ရဲ့ ဆရာဝန်လောက အတွေ့ အကြုံလေးတွေက မှတ်သားစရာ
ဗဟုသုတရစရာလေးတွေ ပါပါတယ်။ဒါမျိုးလေးတွေ အချိန်ရရင် တင်
လေးလုံးရောဂါ ဆိုတာ ဘာမှန်း မသိလို့.. သူများ လက်တို့မေးလိုက်ရသေးတယ်။ အေကိုက်တာတဲ့.. တနေ့က မှ သေချာ သိတယ်။
ကိုယ့်နေရာနဲ့ကိုယ် မနေတတ် မထိုင်တတ်တာ သနားစရာကောင်းတယ်။
အဲလို အခြောက်ဖြစ်သွားရတာက ပါတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လား မိသားစု အခြေနေကြောင့်လား၊ ငယ်ဘ၀ အကြောင်းကြောင်းကြောင့်လား။ ဆိုတာ ကတော့…….
ဪ…တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲလားဆရာမရေ…အဲဒီလိုကောင်လေးတစ်ယောက်ကျနော်ဆိုင်ကနေ အလုပ်ထွက်သွားတာနှစ်ရက်ပဲရှိသေး၊သူက ရခိုင်ကပါ၊သူကို ရခိုင်မလို့လည်းခေါ်ကြတယ်၊သူ့မှာအကိုတွေလည်းရှိတယ် အမတွေလည်းရှိပါတယ်။အကိုတွေကရိုက်ပီး ဆုံးမတာတောင်မရပါဘူး၊ခဏပဲ သူတို့ရောဂါက စိတ်ကြောင့်ပဲလား၊အထုံကြောင့်ပဲလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။သူကလည်းရည်ရွယ်ချက်ကကြီးတယ်ခင်ဗျ..ထိုင်းကိုသွားပြီး ပြင်အုံးမှာတဲ့….ဪဒုက္ခ..ဒုက္ခ…ပြုပြင်ပြောဆို၍လည်းမရပါ။
အင်း…….. သတိထားမိသလောက် ခြောက်ဖြစ်ရတာနှစ်မျိုးရှိမယ်ဗျ။ တစ်ခုက အတိတ်ဘ၀က၀တ်ကြွေးကြောင့်ဖြစ်ရတာ ( ကာမေသုမိစ္စာကံ ) အဲဒါကပြင်လို့မရဘူး။ တစ်ခုက ကြီးပြင်းရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းကြောင့်ဖြစ်ရတာ အဲဒါက ကချိန်တန်လို့ အမှန်သိရင် ပြန်ပြင်လို့ရတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတွေ့အကြုံလေးပြောပြမယ်။ ကျတော်တို့ဆီမှာ အခြောက်တွေတော်တော်ပေါတယ်ဗျ။ အချိန်တန်ရင်နတ်ပွဲတွေကို သူတို့ကိုအပ်ရတာပဲ။ အဲဒိမှာ ဦးလှဆိုတဲ့ဦးလေးကြီးတစ်ဦးရှိတယ် ကျတော့အဖေအရွယ်နဲ့ အတိမ်းမယိမ်းပေါ့။ အခုတော့သေသွားရှာပါပြီ။ သူက အမေအိုကြီးတစ်ယောက်တည်းနဲ့နေရတာ။ အမေအိုကြီးရဲ့ ခန္ဒာကိစ္စအကုန်လုပ်ပေးရတာပေါ့။ နေရင်လည်းသန့်သန့်လေး၊ အရောင်နုနုလေးတွေမှဝတ်တက်တာ။ သူ့အနားရောက်ရင်လည်းမွှေးနေတာပဲ။ အခြောက်တွေဗရုပ်ကျတဲ့ ရာသီကလွဲရင် ကျန်အချိန်တွေမှာ သူ့ဟာနဲ့သူ ကောင်းကောင်းနေတာ။ တစ်နေ့ကျတော်တို့ဆိုင်မှာဈေးလာဝယ်တော့ ရင်းလဲရင်းနှီးလို့မေးလိုက်တယ် ဦးလှရယ်လို့ ဦးလေးကအခုကျတော့လဲကောင်းကောင်းပဲလို့ ဘာလို့ တစ်ခါတစ်ခါကျရင် ခြောက်သွားရတာလဲလို့။ သူကပြန်ပြောတယ် ဘယ်သူကခြောက်ခြင်မှာလဲသားရယ်တဲ့ ဒါပေမယ့်အတိတ်က၀တ်ကြွေးကြောင့်လားမသိဘူး အဲဒိအချိန်ကျရင် အဲဒိစိတ်ကပေါ် ပေါ်လာတာပဲတဲ့။
တက္ကသိုလ်တက်တုန်းကလဲ ခြောက်တစ်ယောက်ကခင်လို့ဆိုပြီးအဆောင်မှာလာနေတယ်။ ချောချောလေး တစ်ဦးတည်းသောသား ချမ်းလဲချမ်းသာတယ်။ ဒီကောင်ကွာ ကျောင်းမှာမိန်းကလေးတွေဒီလောက်ပေါရဲ့သားနဲ့ ယောက်ကျားအချင်းချင်း ပြန်ကြောင်နေရ ရှာတယ်ပေါ့။ အဲဒါနဲ့ကိုယ်တွေကလဲ ဒီကောင်ယောက်ျားလေးပြန်ဖြစ်ရင်တော့ တော်တော်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးနေခိုင်းလိုက်တယ်။ ယောက်ကျားစိတ်ပေါက်အောင်လည်း ပြုပြင်ကြည့်တယ်။ ဒါပေမယ့်မရဘူးဗျ နောက်ဆုံးကျောင်းပြီးခါနီးရောက်တော့ သရိုးသရီလာလုပ်တာနဲ့ပဲ နှင်ချလိုက်ရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်ရောပဲ။ ဆိုတော့ ပြင်လို့ရတဲ့သူက ရနိုင်သလို၊ သူ့ဝတ်ကျွေးနဲ့သူလာတာကိုတော့ သွားပြင်လိုက်ရင်မောတာပဲအဖတ်တင်မှာပဲ။ အခတ်မသင့်ရင်ကိုယ့်တောင်လာ အညှောင့်ကပ်နေနိုင်တယ်။
၉၀ခုနှစ်ဝန်းကျင်လောက်တုန်းက မြို့ထဲ၃၆လမ်းက ပန်းရှိန်ဆံသမှာ ဆံပင်သွားညှပ်တယ်။ အဲဒီမှာ ဆံပင်ညှပ်တဲ့ အခြောက်အချင်းချင်းပြောနေတာ “အဲဒီကောင်မ မိဘတွေက ကိုယ့်သားသမီးကို ခိုင်းစားရက်တယ်” ဘာညာနဲ့ အတင်းတုပ်နေတော့ ကျနော်လည်း ဘာမသိညာမသိနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတုန်း အခြောက်နုနုထွတ်ထွတ် အသစ်ခလေး သူဌေးကျွန်းက ဟိုတယ်မှာ အလုပ်သွားလုပ်မှာကို မတားလို့ ပြောနေတာလို့ သူတို့ဆက်ပြောမှ သိရတယ်။ အခြောက်ဘဲက သူ့ကို အတော်ချစ်ဆိုပဲ၊ နယ်သွားရင် ထမီထုပ်ကို လိုက်ထမ်းပေးသတဲ့။ အဲဒီကြမှ သေဟဲ့ နန္ဒိယ လို့ ကိုယ့်နဖူးကို ရိုက်မိတယ်။
အခြောက်တွေက ဒီလိုဆက်ဆံရင် ဒီလိုရောဂါဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိသိကြီးပါပဲ
ဒါပေမယ့် သူတို့ကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဂရုမစိုက်ကြပဲ အချစ်အတွက် စွန့်စားဝံ့ကြသူတွေပေါ့ …..
အခြောက်ကိုကြည့်မရဘူး … အခြောက်လင်တွေကိုဆို ပိုကြည့်မရဘူး…….. အခြောက်မှန်ရင်တော့ အထက်က ရောဂါနဲ့ သိပ်မကင်းကြပါဘူး. အခြောက်တွေ ဆံပင်ညှပ်ပေးတဲ့ဆိုင်တို့ အခြောက်တွေ အလှပြင်တဲ့ဆိုင်တို့ ဝေးဝေးရှောင်တယ်..သူတို့သုံးတဲ့ ဘလိတ်ဓါး၊ ကပ်ကြေး နဲ့ ဘီးတို့မှာ ပါလာနိုင်တယ်လေ.
မီးငယ်လေးရေ .. evolution ရေးထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ .. အခြောက်တိုင်းက ၀ဋ် မကင်းလို့ ဖြစ်လာတာ များတယ် .. တချို့ကတော့ တမျိုးပေါ့ .. ကြည့်မရတာ ဆိုတာကို ကြည့်ရပါ လို့တော့ မတိုက်တွန်းချင်ပေမယ့် . သူတို့ ညှပ်တဲ့ ဆိုင်မှာ မညှပ်ဘူးဆိုတာ နဲနဲ တဖက်စွန်းရောက်နေတယ် ..
တကယ် ကူးစက်နိုင်ဆုံးက လိင်ကတဆင့် ကူးတာ .. နောက်တစ်ချက်က သွေးသွင်းလို့ ကူးတာ .. သွေးပေနေတဲ့ ပစ္စည်းက ကူးတဲ့ ရာနှုန်းက သိပ် မများပါဘူး .. သိပ် မကြောက်ရမှာကို ကြောက်ပြီး တကယ် ကြောက်ရမှာကို မကြောက်ကြလို့သာ ကူးစက်မှုတွေ မြင့်မားနေတာ ..
ကူးစက်ခံရသူတွေကလဲ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကူးခဲ့ကူးခဲ့ .. ကျွန်တော်တော့ ကျွန်မတော့ .. လိင်ကတဆင့် ကူးတယ်လို့ ဘယ်ပြောကြမှာလဲ .. ဆံပင်ညှပ်ရင်း ကူးတာဖြစ်မယ် ဆိုပြီး တလွဲပြောကြတာ ..
ရပ်ကွက်ထဲမှာ အရင်တုန်းက ပြောစမှတ် တခု ရှိခဲ့တယ် .. အဲဒီလူက ဆေးခန်းမှာ ပင်နဆလင် ထိုးရတဲ့ ကာလသားရောဂါ ဖြစ်တယ် ဆိုပါတော့ .. ဆေးထိုးခံရပြီဆိုရင် လူတွေက မေးကြရော .. သူက ဘာပြောသလဲ ဆိုတော့ .. ညောင်းတာကို ပင်နဆလင်ထိုးတာလို့ ဆိုတယ် .. ဒါကြောင့် အရပ်ထဲမှာ ရံဖန်ရံခါ ကျွန်မ ညောင်းနေတာ ပင်နဆလင် ထိုးပေးပါ လို့ လာပြောတတ်တယ် .. တကယ်က သူကိုယ်တိုင်လဲ တကယ်သိတာမဟုတ်တော့ သူ့ကို ပြန်ရှင်းပြဖို့ အတော်ခက်သွားခဲ့တယ် ..
ဟိုအလှကုန်ကုမ္ပဏီမှာဆို အဲ့လိုကောင်တွေ မနက်ရုံးတက်ရင်
ညကတိုက်ပွဲ (ဘပုအသုံးခဏငှား ;) ) အကြောင်းလူတကာလိုက်ပီး စားမြုပ်ပြန်နေကြတာ ညကဘယ်မင်းသားနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရလို့ ဘယ်မော်ဒယ်နဲ့စီးချင်းထိုးခဲ့ရလို့ ဘယ်အဆိုတော်က ဘာပုလို့ ညာပုလို့နဲ့ အမူအရာတွေပါ လုပ်လုပ်ပြနေတာရွံစရာကြီး
မိဘနဲ့ မိသားစု မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်… ငယ်ငယ်ကတည်းက ပြုစုပျိုးထောင်မှူပေါ် မူတည်ပါလိမ့်မယ် .. ။
အချစ်အတွက် အသက်ကိုပင်စတေးရ စတေးရဆိုတာဒါကိုပြောတာထင်ပါရဲ့